တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ရေး ရွှေတိဂုံစေတီတွင် အုန်း၊ ငှက်ပျောပွဲ လှူဒါန်း ဆုေ?? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ရေး ရွှေတိဂုံစေတီတွင် အုန်း၊ ငှက်ပျောပွဲ လှူဒါန်း ဆုေ??
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ရေးအတွက် အုန်းငှက်ပျောပွဲလှူဒါန်း ဆု တောင်းမှုမှာ ယမန်နှစ်ကထက် များ ပြားလာကြောင်း ရွှေတိဂုံဂေါပက အဖွဲ့မှသိရသည်။ ”ပုံမှန်ထက်သုံးပုံပုံတစ်ပုံ လောက်ကို တက်လာတယ်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွေလည်းနီးပြီဆို တော့လာပြီး ဆုတောင်းတဲ့ ပြည်သူ တွေများလာတာပေါ့။ နေ့စဉ်လာလှူဒါန်းတဲ့ပွဲတွေကို အုန်း၊ ငှက်ပျော ပွဲသိမ်းတာဝန်အဖွဲ့ကသိမ်းတယ်။ပြီးရင် ဒီနေ့အဖီးဘယ်လောက်ရသလဲတွက်ချက်ပြီးသိုလှောင်ရုံကို ပို့ရတယ်”ဟု ရွှေတိဂုံစေတီတော်၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဌာနမှူး ဦးရဲ အောင်နိုင်က ပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ငှက်ပျောနှင့်အုန်းသီး စုစုပေါင်းတစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှလေးသိန်းနီးပါးခန့်ရ ရှိနေကြောင်း ၎င်းတို့၏မှတ်တမ်းများအရသိရသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီ၌လှူဒါန်းမှု အ များဆုံးနေရာမှာ ရွှေတိဂုံစေတီ် မြောက်ဘက်မုခ်ရှိ လောကပါလ ယက္ခမယ်တော်ကြီး တည်ရှိရာတွင် ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားမိဘအများ ဆုံး လာရောက်လှူဒါန်းကြသည်ဟု အုန်း၊ ငှက်ပျောပွဲသိမ်းသည့်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးက ပြောသည်။ ”ဘုရားမှာတောင် လူသိပ်မရှိပါဘူး။ မယ်တော်ကြီးတို့၊ အဘဘိုး မင်းခေါင်တို့ဆီမှာတော့ အများကြီးပဲ။ နံနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်းဆိုရင် လူပိုကျပ်တယ်”ဟု ၎င်းဝန်ထမ်း ကပြောသည်။ အုန်း၊ ငှက်ပျောပွဲများ၏ဈေး နှုန်းမှာ အမြင့်ဆုံးကျပ် ၁၃ဝဝဝ ဖြစ် ပြီး အနိမ့်ဆုံးမှာ ကျပ် ၈၅ဝဝ ကျသင့်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့လာရောက်လှူဒါန်းရခြင်းမှာ ယခုဖြေဆိုရမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၌ အမှတ် ကောင်း၍ဂုဏ်ထူးများရရှိစေရန် ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု လာ ရောက်လှူဒါန်းသည့် ကျောင်းသား မိဘတစ်ဦးကပြောသည်။ ”ကလေးတွေက တစ်နှစ်လုံး စာလုပ်ပြီးပြီ။ အခုလိုဖြေခါနီးအချိန်ကျတော့ အမေကြီးဆီမှာ လာဆု တောင်းပေးရတာပေါ့။ ရိုးရာလည်း ဖြစ်တယ်လေ၊ အန်တီတို့က။ ရှိခိုးဆုတောင်းပြီးတာနဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ပြည့် ဝဖို့မောင်းတီးပြီး ဆုတောင်းရတယ်။ ခြောက်ချက်တီးရင်ခြောက် ဘာသာ။ ငါးချက်တီးရင်ငါးဘာသာ ဂုဏ်ထူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပါ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ လာရောက်ဆုတောင်းသူတို့မှာ ¤င်းတို့သားသမီးများ၏လိုင်စင်ပုံပါ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(မိတ္တူ)စာရွက်များကို ငှက်ပျောပွဲအကြား ညှပ်ကာဆု တောင်းကြသည်။
ညောင်ဦးမြို့မှ တောင်သူများ နွေရာသီအတွက် နွားစာများကို မြို့နှင့်မိုင် ၂ဝ ကျော်ဝေးသော တော??